झलनाथले भने –‘केपी ओली गोमन साप जस्तै हुनुहुँदो रहेछ’ - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार झलनाथले भने –‘केपी ओली गोमन साप जस्तै हुनुहुँदो रहेछ’
१० पुस, काठमाडौं । प्रचण्ड–नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इगो साँध्ने व्यक्ति भएको बताएका छन् । उनले पूर्व सहकर्मी एवं अध्यक्ष ओलीलाई गोमन सापसँग तुलना समेत गरे । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खनालले महाधिवेशनमा आफूले हराएपछि बदला लिन खोजेको बताए । उनले अघि भने, ‘उहाँ गोमन सापजस्तै हुनुहुँदोरहेछ ।’
गोमन सापलाई कसैले हिर्कायो र भाग्यो भने उसले हिर्काउने मान्छेको तस्वीर दिमागमा राख्ने र मौका पाउँदा ठुंङ्ग्ने गरेको खनालले सुनाए । उनले नेकपाको आधिकारिक आफूहरु भएको भन्दै उनले केपी शर्मा ओली समूहले बालुवाटारमा गरेको बेला रुखको बोक्रा मात्र भएको बताए ।
पार्टी फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत बहुमत चाहिने भन्दै उनले भने, ‘अहिले संसद भंग गरेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत चाहिन्छ । त्यसैले नेकपा फुटेको छैन, चोइट्याउन खोजेको हो । रुखका बोक्रा निस्किन सक्छन्, बोक्रा निस्किँदा रुख नै बढ्यो भन्न मिल्छ र ? बालुवाटारमा भेला भएको बोक्रा मात्र हो, नेकपा जस्ताको तस्तै छ ।’
Previous articleकेपी ओली गणतन्त्र र संघीयता विरोधी हुन् : माधव नेपाल
Next articleप्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गर्ने
किन टाँसिन्छ घरको ढोकामा नाग वा सर्पको तस्बिर ?